Abavelisi beefilimu zeDichroic - iTshayina yeeDichroic abaXhasi kunye neFektri
Iphepha leFilimu eQhelekileyo yokuHamba kwiGlasi okanye iAcrylic
Iphepha leFilimu eQhelekileyo ye-Iridecent ye-Glass okanye i-Acrylic igcwalisa indawo yakho ngokutshintsha imibala efudumeleyo kwaye iyafumaneka kwimixube eyahlukeneyo kunye namanqanaba okuhambisa ukukhanya. Ifilimu ye-Iridescent ikwabonelela ngemfihlo ngokufihla ukubonakala ngokuthe ngqo kunye nokuvumela ukuhambisa ukukhanya okugqwesileyo. Besisoloko sikhethekile kwifilimu yokuhombisa ngaphezulu kweminyaka eyi-15, ifilimu yethu yokuncamathelisa iridescent ithandwa kakhulu kwimarike yaseYurophu naseMelika. Sinethemba lokuba liqabane lakho lexesha elide e China. Nayiphi na imibuzo malunga neemveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi, siya kuzama konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nolwaneliseko lwakho.